Qodobada heshiis horu dhac ah oo ay gaareen maamulada Puntland iyo Galmudug. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Qodobada heshiis horu dhac ah oo ay gaareen maamulada Puntland iyo Galmudug.
Qodobada heshiis horu dhac ah oo ay gaareen maamulada Puntland iyo Galmudug.
Mas’uuliyiinta labada dowlad gobolleed Puntland iyo Galmudug ayaa heshiis hordhac oo lagu soo afjarayo colaada Gaalkacyo ku gaaray magaalada Abu Dubai, waxaana hishiiskan goob joog ka ahaa madaxda dowlad gobolleedyada dalka.
Qodobada labada maamul ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ah in xabada la joojiyo, islamarkaana dadka ku barakacay dagaalka Gaalkacyo dib loo soo celiyo lana furo wadda hadal lagu dhameynayo wixii khilaaf ah ee u dhaxeeya labada dhinac.
Dalka isku taga imaaraadka Carabta waxaa xiligan ku sugan guud ahaanba mas’uuliyiinta dowlad gobolleedyada qeybta ka ah dowladda dhexe, kuwaa oo halkaa wadda hadallo kula leh mas’uuliyiin ka tirsan isku taga imaaraadka Carabta oo ay ka wadda hadlayaan arrimo la xiriira doorashada 2016ka iyo maaligalin Imaaraadku ugu talagalay maamul gobolleedyda dalka.
Previous articleWasiiradii dalka Itoobya oo isku shaadheyn lagu sameeyey (Akhriso ).
Next articleDalka Ciraaq ciidamadooda oo gudaha u galey magaalada Mosul labo sano kadib.